काेराेना भाइरसः के हाे, लक्षण र बच्ने उपाए | eAdarsha.com
काेराेना भाइरसः के हाे, लक्षण र बच्ने उपाए
कोरोना भाइरस के हो?
यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। यो भाइरस निकै छिटो गतिमा फैलिने हुनाले जोखिम धेरै छ। कोरोना भाइरसबाट लाग्ने राेगलाई कोभिड-१९ भनी औपचारिक नाम दिइएको छ । अहिलेसम्म काेभिड १९ को उपचारका लागि कुनै विशेष औषधि निर्माण भइसकेको छैन। तर सही उपाय अपनाउन सकियो भने यसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारे विभिन्न नयाँ उपायहरु खेजिभैरहेकाे छ । यदी प्रत्येक व्यक्तिले सावधानी अपनाइ दिने हो भने कोरोना भाइरसको जोखिम धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ।
काेराेना भाइरस बारे जानकारी लिनु र यसकाे जखिमबाट बच्ने उपाए अवलम्बन गर्ने हो भने हामी आफैँ बच्न र अरुलाई बचाउन सक्छौं।
काेराना भाइरस कसरी सर्दछ
यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। एक अर्कासँग करीव सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू बीच (करीव ६ फिट भित्र)।
संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा उत्पादित श्वासप्रवाहको माध्यमबाट (नजिकै बस्ने मानिसहरूका मुख वा नाकमा पुग्न सक्छ)
दूषित सतहहरू वा वस्तुहरूसँगको सम्पर्कबाट
कुनै व्यक्तिले भाइरस भएको सतह वा वस्तुलाई छोएर आफ्नो मुख, नाक, वा आँखामा लग्याे भने पनि याे भाइरस फैलिन्छ।
के बिरामी नभएको मानिस भाइरस फैलाउन सक्छ?
कोरोनाको पहिचान हुन नै करिब १४ दिन (२ हप्ता) कुर्नुपर्ने र यसअघि नै कोरोना मानिसमा सरिसक्ने भएकाले यसको जोखिम बढेको हो।
व्यक्तिहरू सबैभन्दा संक्रामक मानिन्छन जब उनीहरूमा धेरै लक्षणहरू हुन्छ।
व्यक्तिहरूले लक्षणहरू देखाउँनु अघि पनि संक्रमण फैलिने सम्भव हुनसक्ने रिपेर्टहरूले देखाएकाे छ ।
भाइरस कत्ति सजिलै फैलिन्छ
काेभिक १९ लाई निम्त्याउने भाइरस केही प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रहरूमा वा समुदायमा सजिलै र दिगो रूपमा फैलिएको देखिन्छ।
केभिड १९ का लक्षणहरु के के हुन्
ज्वरो आउनु तथा थकाई लाग्नु, लगातार सुख्खा खोकी लाग्नु र श्वासप्रश्वासमा समस्या यसको मुख्य लक्षण हुन्।
यदी यी लक्षण भएका कुनै व्यक्तिसँग तपाई सम्पर्कमा आउनु भएको थियो भने लक्षण नदेखिएसम्म १४ दिन घरमै बस्नुहोस्। यदी सात दिनसम्म पनि निको नभए या लक्षण बढ्दै गए चिकित्सकसँग परामर्शका लागि अस्पताल जाने।
कसमा कोरोनाको उच्च जोखिम हुन्छ?
श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोग भएका‚ वृद्धवृद्धा र डायबेटिज र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूमा यसको उच्च जोखिम हुने बताइएको छ।
कोरोना भाइरसकाे उपचार
आजको मितिसम्म, कोरोना भाइरसबाट बँच्न वा उपचारका लागि कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर सही उपाय अपनाउन सकियो भने यसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । संक्रमितमा देखिएको लक्षणअनुसारको औषधि उपचार गरी स्याहार गर्नुपर्छ।
कसरी सुरक्षित रहने
बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिच हात धोएमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुन्छ। हात धुँदा औंलाको बीचमा, हातको अगाडि र पछाडि र नङलाई पनि राम्ररी धुनुपर्छ।
भुइँ वा सतह फोहर छ भने साबुन वा सर्फ पानीले भुइँलाई राम्ररी सफा गर्ने।
अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने
खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने, प्रयोग गरेको टिस्यु तुरुन्त फोहर र्‍याल्ने ठाँउमा र्‍याल्ने र साबुन पानीले हात धुने
रुघाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा बस्ने।
गेडागुडी एवं माछा, मासु, अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाने ।
कोभिड-१९ भाईरसलाई बढी भन्दा बढी चिनौं, सही जानकारी फैलाऔं, कसरी सर्ने रहेछ, कसरी बच्ने बुझौं, कसरी फैलन नदिने जानौं। यही ज्ञान र त्यही अनुसारको हाम्रो व्यवहारले नै हामीलाई यो लडाईं जिताउने छ।
अरु देशबाट प्राप्त हुने सही समाचार र अनुभवहरुको आधारमा सावधानीपूर्वक अघि बढ्नु उचित हुन्छ । यसमा सरकारले मात्र गर्नुपर्ने र सक्ने अवस्था नै छैन, सबै प्राइभेट क्षेत्र, सामान्य जनताले साथ दिनुपर्छ ।
(याे सामाग्री काराेना भाइरसकाे जानकारीकाे निमित्त विभिन्न इन्टरनेट श्राेतबाट तयार पारिएकाे हाे)